UNGAYIKHUMBULA NJANI I-IMEYILE KWI-IMEYILE? UNGATHUMELI II-IMEYILE - ITHAMBILE
Ngaba wakhe wathumela i-imeyile ngempazamo kwaye wazisola kwangoko? Ukuba ungumsebenzisi we-Outlook, unokulungisa impazamo yakho. NantsiUyikhumbula njani i-imeyile kwi-Outlook.
Kukho amaxesha athile apho sicinezela iqhosha lokuthumela ngokukhawuleza kwaye sithumele ii-imeyile ezingaphelelanga okanye ezingalunganga. Ezi mpazamo zinokukhokelela kwiziphumo ezibi ngokuxhomekeke kwinqanaba lobuzaza bolwalamano phakathi kwakho nommkeli. Ukuba ungumsebenzisi we-Outlook, kusenokubakho ithuba lokugcina ubuso bakho ngokukhumbula i-imeyile. Ungabuyisela okanye khumbula i-imeyile kwi-Outlook ngonqakrazo nje olumbalwa ukuba iimeko ezithile ziyaneliseka kwaye isenzo senziwe ngexesha.
Imiqathango yokuTshintsha okanye ukhumbule i-imeyile oyithumele kwi-Outlook
Kuza kwenzeka ntoni emva kokukhumbula okanye ukubuyisela i-imeyile kwi-Outlook?
Enye indlela yokuKhumbula okanye ukuFaka uMyalezo kwi-Outlook
Ukulibazisa ukuthumela ii-imeyile kwi-Outlook
Nangona inkqubo yoku rhoxisa okanye ubeke endaweni imeyile kwi-Outlook Kulula kakhulu kwaye kunokwenziwa konqakrazo olumbalwa, inqaku linokusetyenziswa kuphela ukuba iimeko ezimbalwa ziyaneliseka. Ngaphambi kokutsiba kumanqwanqwa, makhe sijonge iimeko ezifanelekileyo zokukhumbula okanye zokutshintsha i-imeyile:
Bobabini kunye nomnye umsebenzisi kufuneka nibe neMicrosoft Exchange okanye iakhawunti yeOfisi 365.
Kuya kufuneka usebenzise i-Outlook kwiWindows yakho. Inqaku lokukhumbula alifumaneki kubasebenzisi be-Outlook kwi-Mac okanye kwiWebhu.
Ukhuselo loLwazi lweAzure akufuneki ukhusele umyalezo womamkeli.
I-imeyile kufuneka ingafundwanga ngumamkeli kwi-inbox. Inqaku lokukhumbula aliyi kusebenza ukuba i-imeyile ifundwe okanye ihluzwe ngemithetho, izihluzi zogaxekile, okanye nayiphi na enye into ekucocwa kuyo kwibhokisi yomamkeli.
Ukuba zonke ezi meko zingasentla ziyathandeka, ke kunokwenzeka ukuba ube nakho khumbula i-imeyile kwi-Outlookngokulandela la manyathelo angezantsi:
Le ndlela inokusetyenziswa ngabasebenzisi kwi-Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013, Outlook 2016, kunye ne-Outlook 2019 kunye neOfisi 365 kunye nabasebenzisi beMicrosoft Exchange.
indlela yokuqwalasela i-ftp server
1. Fumana i ' Izinto ezithunyelweyo ’Ukhetho kwaye ucofe ukuyivula.
2. Vula umyalezo ufuna ukubuyisela okanye ukhumbule ngokunqakraza kabini. Isici asiyi kufumaneka kuwo nawuphi na umyalezo kwiFestile yokuFunda.
3. Cofa ku ' Izenzo ’Kwithebhu yoMyalezo. Imenyu ehlayo iya kuvela.
4. Cofa ku ' Khumbula umyalezo . ’
5. Ibhokisi yencoko yababini 'Khumbula umyalezo' iya kuvela. Unokukhetha enye yeendlela ezimbini ezikhoyo ebhokisini. Ukuba ufuna ukususa i-imeyile yakho kwibhokisi yomamkeli, khetha u ' Cima iikopi ezingafundwanga zalo myalezo ’Ukhetho. Ungaphinda ubeke endaweni entsha i-imeyile ngokukhetha i ' Cima iikopi ezingafundwanga kwaye ubeke umyalezo omtsha ’Ukhetho.
6. Jonga ' Ndixelele ukuba ukukhumbula kuyaphumelela okanye kuyasilela kumamkeli ngamnye ’Ibhokisi ukuze wazi ukuba ukukhumbula kwakho kunye nokutshintsha iinzame zakho ziphumelele okanye akunjalo. Cofa apha Kulungile .
7. Ukuba ukhetha olokugqibela ukhetho, iya kuvula ifestile enomyalezo wakho woqobo. Ungatshintsha kwaye uguqule imixholo ye-imeyile yakho ngendlela othanda ngayo emva koko uyithumele.
Ukuba awufumani ukhetho lokukhumbula, ke kunokwenzeka ukuba enye yeemeko ezingasentla ingoneliseki. Khumbula i-imeyile kwi-Outlook ngokukhawuleza nje ukuba uqaphele impazamo yakho njengoko kukuncintisana nexesha kunye nokuba ngaba abamkeli bafunde umyalezo okanye cha. Ukuba uthumele i-imeyile kubasebenzisi abaninzi, umzamo wokukhumbula uya kwenzelwa bonke abasebenzisi. Awunakho ukukhetha ukhetho lokukhetha kubasebenzisi abakhethiweyo kwi-Outlook.
Funda kwakhona: Uyenza njani iAkhawunti eNtsha ye-imeyile ye-imeyile?
Emva kokuba wenze iinzame zakho, impumelelo okanye ukusilela kuya kuxhomekeka kwiimeko ezithile kunye nezinto. Uya kwaziswa ngempumelelo okanye ukusilela ukuba ujongile i ' Ndixelele ukuba ukukhumbula kuyaphumelela okanye kuyasilela kumamkeli ngamnye ’Ukhetho kwibhokisi yencoko. Ngaphantsi kweemeko ezifanelekileyo, umamkeli ngekhe azi ukuba umyalezo ukhunjulwe kwibhokisi yakhe engenayo. Ukuba i ‘ Yenza ngokuzenzekelayo izicelo zentlanganiso kunye neempendulo kwizicelo zentlanganiso ’Yenziwe kwicala lomamkeli, emva koko akufuneki ukhathazeke ngayo nantoni na. Ukuba ikhubazekile, umamkeli uya kufumana isaziso malunga nesenzo sokukhumbula umyalezo. Ukuba isaziso sicofwe kuqala, umyalezo uyakukhunjulwa, kodwa ukuba ibhokisi engenayo ivulwa kuqala kwaye umsebenzisi uvula umyalezo wakho, inkumbulo ayizukuphumelela.
Akukho siqinisekiso sempumelelo xa ukhumbula umyalezo kwi-Outlook. Imiqathango eyimfuneko ayinako ukoneliseka ngalo lonke ixesha usenza impazamo. Inokudlulisa umyalezo ongalunganga kubamkeli kwaye ikwenze ubonakale ungenabuchule. Unokusebenzisa enye indlela eya kuba ngaphezulu kunokuba luncedo kwikamva.
Ukuba ungumntu onoxanduva, ukuthumela imiyalezo eneempazamo kunokuba nefuthe elibi kumfanekiso wakho. Unokulibazisa ixesha lokuthumela i-imeyile kwi-Outlook ukuze ube nexesha lokulungisa iimpazamo zakho. Oku kwenziwa ngokugcina ii-imeyile kwi-Outbox ye-Outlook ixesha elithile ngaphambi kokuzithumela komnye umsebenzisi.
1. Yiya kwi Ifayile ithebhu.
2. Khetha ' Lawula iMigaqo kunye neZilumkiso ukhetho ’Phantsi kwecandelo lolwazi kwi‘ Lawula imigaqo kunye nezilumkiso . ’
3. Cofa apha 'Imigaqo ye-imeyile 'Kwaye ukhethe' Umgaqo omtsha . ’
4. Yiya ' Qala kumgaqo ongenanto ’Icandelo kwiMigaqo Wizard. Cofa ku ' Sebenzisa umthetho kumyalezo endiwuthumelayo 'Kwaye ucofe' Okulandelayo . ’
5. Khetha ' Jonga ukuhanjiswa ngenani lemizuzu ' kwi ' Khetha iintshukumo ’Uluhlu.
6. Khetha inani 'kwi' Hlela inkcazo yomthetho ’Uluhlu.
Iwindows 10 google chrome imiba
7. Chwetheza inani lemizuzu ofuna ukuba i-imeyile yakho icothiswe ngayo ' Ukuhanjiswa okumiselweyo ’Ibhokisi. Unokukhetha ubuninzi bemizuzu engama-120. Cofa apha Okulandelayo .
8. Khetha naziphi na iimeko ozinqwenelayo uze ucofe ku ’ Okulandelayo . ’
9. Nika igama kumgaqo wakho kwi ' Chaza igama lalo mgaqo ’Ibhokisi. Jonga ' Vula lo mgaqo 'Ibhokisi kwaye ucofe' Gqiba . ’
10. Cofa apha Kulungile ukufaka utshintsho.
Ngokulibazisa umyalezo othile ngexesha lokuqamba:
Ngelixa ubhala umyalezo, yiya kwi ' Khetha 'Kwaye ukhethe' Ukulibazisa ukuhanjiswa . ’
Khetha i ' Musa ukuhambisa ngaphambili ’Ukhetho kwi’ Iipropati ’Ibhokisi yencoko.
Khetha ifayile ye- umhla nexesha ufuna umyalezo uthunyelwe kwaye uvale iwindow.
Lungisa i-Outlook ingavumelanisi kwi-Android
Uyithumela njani iKhalenda kuMmeli kwi-Outlook
Ungasusa njani umgca wokuPrinta ngaphakathi Windows 10?
Ungarekhoda njani iiVidiyo ezihamba kancinci kuyo nayiphi na ifowuni ye-Android?
Siyathemba ukuba esi sikhokelo sasiluncedo kwaye wakwaziukuya khumbula i-imeyile kwi-Outlook . Sebenzisa ukhetho lokukhumbula ngokukhawuleza nje ukuba uqaphele ukuba wenze impazamo. Unokukhetha ukulibazisa umyalezo wakho ngokulandela amanyathelo angentla ukuba uhlala ujongana nempazamo kakhulu. Ukuba, nangayiphi na indlela, awunakho ukubuyisela okanye khumbula i-imeyile kwi-Outlook , emva koko thumela uxolo kubamkeli abafanelekileyo kwaye uthumele enye i-imeyile enomyalezo ochanekileyo.
Imithwalo ye-youtube kodwa ayizukudlala
Itunes impazamo yokuhlaziya impazamo windows 10
Uhlaziyo lweWindows luqhubeka nokufaka uhlaziyo olufanayo
Iifestile ezili-10 zokukhanya ebusuku azifumaneki
windows 10 seta ngokutsha uhlaziyo lweWindows
Ukungaboni ngasonye kokujonga ibug